यी चार राशि भएका व्यक्ति, जसले कमाउँछन् टन्नै सम्पति – Krazy NepaL
यी चार राशि भएका व्यक्ति, जसले कमाउँछन् टन्नै सम्पति
May 21, 2021 621
काठमाडौँ । हुनतः धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछ।
कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन्। कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन।
१) वृष राशि
वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलाशी सामान किन्ने शौख हुन्छ । औसत ब्राण्डका सामग्री यी राशिका ब्यक्तिलाई मन पर्दैन । तसर्थ यी राशिका ब्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायीत हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका ब्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन् । उनिहरुलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ ।
२) वृश्चिक राशि
धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन्। यस राशिका ब्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ। ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन। दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफैँ पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ।
३) कर्कट राशि
कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ। यी राशिका ब्यक्ति अवसरका खोजिमा हुन्छन्। जहाँ उनिहरुको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथी बनिदिन्छ। कर्कट राशिलाई स्वभावतः धनी बनाउन उनिहरुको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ। यी राशिका ब्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडैं धनि बन्ने गर्दछन्।
४) सिंह राशि
सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ। उनिहरु अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन्। साथै उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ। महंगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनिहरुको सामान्यतयाः पूरा हुन्छ।
उल्लेखित सूचीमा तपाईको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। किनकी सम्पति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मष्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने।
Posted in राशिफल, समाचार
Prevकुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
Nextनाकको छेउमा कोठी हुने व्यक्ति रहस्यमय, अरू ठाँउमा हुने कस्ता ? जान्नुहाेस्
कपालमा चायाँ लठ्ठिएर दिक्क हुनुभएको छ ? छुटकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् !
हरेक दिन काजु खाँदा हुने यस्ता चकित पार्ने फाइदाहरु हुन्छन्
घरको यो दिशामा राख्नुहोस् मयुरको प्वाँख, मिल्छ ऋणबाट मुक्ति
गर्भावस्थामा महिलाले झेल्नुपर्छ यस्ता समस्या, कसरी पाउने राहत ?
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (43980)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23158)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17979)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15857)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13958)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13122)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12375)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12174)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12166)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11767)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय !
राजाकै जस्तो जीवन विताउँछन् यी राशिका व्यक्ति, हुन्छन् निकै धनी र विलासी
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने !
एक पटक खाए महिनाभर पुग्ने ग’र्भनि’रो’धक चक्की !
© Copyright 2016–2021 Krazy NepaL. All rights reserved.